Tag: kuenderana kwekutengesa | Martech Zone
Tag: kuenderana kwekutengesa
Chipiri, Zvita 15, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kwerinopfuura makore gumi, isu takaona Kushanda Kwekushandisa kubatsira kuongorora uye kuita nzira dzekutengesa mune chaiyo-nguva kumasangano. Nepo Mutevedzeri weMutungamiriri aishanda pamazano enguva refu uye kukura, mashandiro ekutengesa anga aine hunyanzvi uye achipa hutungamiriri hwezuva nezuva uye kudzidzisa kuti bhora rifambe Ndiwo mutsauko uripo pakati pemurairidzi mukuru nemurairidzi anogumbura. Chii chinonzi Kushanda Kushanda? Nekuuya kwemaomnichannel maratidziro ekushambadzira uye kushambadzira otomatiki, isu takaona kubudirira muindastiri
China, Kurume 19, 2009 Mugovera, October 18, 2014 Douglas Karr
Ichi chirevo chakanyatsomira neni pasvondo rapfuura: Chinangwa chekushambadzira ndechekuti kutengesa kusanyanya. Chinangwa chekushambadzira ndechekuziva uye kunzwisisa mutengi zvakanyatsonaka zvekuti chigadzirwa kana sevhisi zvinomukwanira uye kuzvitengesa pachako. Peter Drucker Nemidziyo iri kudzikira uye mutoro webasa uchiwedzera kune wepakati mushambadzi, zvakaoma kuchengeta chinangwa cheako wekushambadzira kuyedza kumusoro kwepfungwa. Mazuva ese atinosangana nawo